George RR Martin | Suugaanta Hadda
Encarni Arcoya | 15/10/2021 08:09 | Qorayaasha
Hadda, ku dhawaad ​​qof kasta oo arkay taxanaha Game of Thrones wuu yaqaan magaca George RR Martin iyo xiriirka ay la leedahay taxanaha. Laakiin haddii aad ka mid tahay kuwa yar ee aan aqoon, waa qoraaga taxanaha sheekooyinka A Song of Ice and Fire, oo koobaya taariikhda taxanaha telefishanka ee caanka ah.
Laakiin maxaad ka taqaan GRRM, sida qaar ka mid ah taageerayaashoodu ugu yeeraan? Waa maxay daraasadda? Imisa abaalmarin ayay leedahay? Waa maxay buugta aad qortay? Ogow wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qoraakan.
1 Waa kuma George RR Martin?
1.1 Waxa George RR Martin bartay
1.2 Noloshiisa ugu gaarka ah
1.3 Abaalmarino aad heshay
2 Waxa GRRM qoray
Waa kuma George RR Martin?
George Raymond Richard Martin, oo loo yaqaan George RR Martin ama GRRM, waa mid ka mid ah sheekooyinka sayniska Maraykanka ee ugu caansan, qorayaasha khiyaaliga iyo argagaxa iyo qorayaasha shaashadda. Wuxuu caan ku noqday gaar ahaan taxanaha A Heesta Barafka iyo Dabka, oo loo habeeyay taxanaha telefishanka sida buuggii ugu horreeyay ee taxanaha, Game of Thrones. Si kastaba ha ahaatee, taxanahaas ka hor wuxuu lahaa guulo kale.
George RR Martin ku dhashay kuna koray qoys shaqeeya. Wuxuu ahaa cunuggii ugu horreeyay ee stevedore Talyaani-Jarmal iyo haweeney reer Irish ah. Wuxuu leeyahay laba walaalo oo kale.
Tan iyo markii uu yaraa aad buu u xiisayn jiray wax akhriska wuxuuna si joogto ah u ahaa buugaagta sidoo kale wuxuu bilaabay inuu qoro sheekooyinka isagoo aad u yar.
Waxa George RR Martin bartay
Maadaama uu yaraa wuxuu ogaa wuxuu rabo mustaqbalka, marka markuu ahaa da'da ku habboon wuxuu iska qoray Jaamacadda Northwwest ee Evanston, Illinois, halkaas oo uu ku bartay saxaafadda kuna qalin jabiyay 1971.
Markii ay dhammaatay, waa la qabtay diidmo miyir leh waxaana loo igmaday inuu maamulo tartamada chess -ka iyo sidoo kale in uu professor ka yahay machadka Clarke Institute ee Dubuque, Iowa.
Wuxuu isku daray shaqadiisii ​​qorista, maadaama waqtigaas uu bilaabay inuu aad ugu firfircoonaado qaybta suugaanta oo uu qoro shaqooyin badan oo mala -awaal ah oo gaagaaban, qaarkoodna lagu abaalmariyay, gaar ahaan abaalmarinta Hugo iyo Nebula.
Mid ka mid ah sheekooyinkii ugu horreeyay ee albaabada badan u furay ayaa ahaa Geerida Iftiinka, oo la qoray 1977kii, sidaasna ku gaadhay in uu naftiisa u hibeyn karo si gaar ah qorista, isku qasan sheekooyinka sayniska, cabsida iyo khiyaaliga.
Qoraalka ka sokow, wuxuu bilaabay inuu jeclaado shaqadiisa Hollywood -ka sida qoraa -shaashadda, isagoo ka qeybqaatay dhowr taxane telefishan sida Beauty and the Beast, The Twilight Zone, anthologies of history world ...
Ma aysan raagin, tan iyo 1996kii wuxuu go'aansaday inuu ka tago Hollywood wuxuuna diiradda saaray shaqadiisa suugaaneed ee Santa Fe, New Mexico, halkaas oo uu ka bilaabay inuu qoro taxanaha buugaagta A Song of Ice and Fire, oo ka bilaabma Game of Thrones.
Noloshiisa ugu gaarka ah
Wuxuu noloshiisa la wadaagay Gale Burnick, a guurka oo socday kaliya afar sano. Si kastaba ha noqotee, tani ma sii wadin socodkeedii waxayna ku dhammaadeen kala go '1979.
Si kastaba ha ahaatee, jaceylku mar kale ayuu albaabkiisa garaacay 2011 kii oo uu guursaday Parris McBride.
Labadan xaas ka hor, wuxuu lahaa lammaane, Lisa Tuttle, oo uu la joogay 70 -meeyadii.
Wuxuu leeyahay shineemada Jean Cocteau oo ku taal Santa Fe, iyo weliba Kafeega, isaga oo dib u soo celinaya oo casriyeynaya, gaar ahaan kan dambe, oo u rogay makhaayad kafateeriya.
Abaalmarino aad heshay
Ka sokow noqoshada wax -qabadka marka ay timaaddo sheekooyinka qoran, George RR Martin wuxuu ku faani karaa inuu ahaa qoraa Waxay siiyeen abaalmarino badan tan iyo markii uu bilaabay xirfadiisa suugaaneed 1971 -kii. Qaar ka mid ah abaalmarino badan oo uu helay waxaa ka mid ahaa:
Abaalmarinta Hugo ee sheekada ugu gaaban oo ugu wanaagsan iyo sheekada ugu fiican (Hees loogu talagalay Lya, Sandkings, Jidka Iskutallaabta iyo Dragon).
Abaalmarinta Locus ee sheekooyinka gaagaaban ee ugu fiican, ururinta, sheekada iyo sheekada gaagaaban (Duufaannada Windhaven, Sandkings, Jidka Cross iyo Dragon), Nightflyers).
Ku guuleystaha Nébula ee sheekada ugu fiican (Sandkings, Sawirka Carruurtiisa.
AnLab ee loogu talagalay sheeko -gaaban gaagaaban ee ugu wanaagsan, taxane ...
Abaalmarinta Ignotus ee Novel -ka Ajnabiga ah ee ugu Fiican (Ciyaarta carshiyada, isku dhaca boqorrada, duufaanta seefaha).
Tan iyo 2012 ma uusan helin wax abaalmarino ah mar kale, sidoo kale sababtoo ah ma uusan qorin in muddo ah.
Waxa GRRM qoray
73 jir, George RR Martin waa qoraa aan dhihi karin ma uusan qorin buugaag. Dhab ahaantii, waxay leedahay qaar badan, oo u dhexeeya sheekooyin madaxbannaan, taxane, buugaag sheeko iyo sheekooyin.
Waa run in shaqada isaga ku kalliftay inuu caan noqdo, oo ilaa maanta weli la hadal hayo inta badan waa tan taxane Heesta Barafka iyo Dabka, loogu talagalay taxanaha telefishanka sida Game of Thrones, oo ah magaca buugga ugu horreeya ee furaya sheekada.
Buuggan ka sokow, waxaan haynaa:
Duufaan seefo ah.
Iid loogu talagalay Tukayaasha.
Qoob ka ciyaarka dawacooyinka.
Dabcan, maskaxda ku hay taas labadii ugu dambeysay weli lama qorin iyo in, marka lagu daro, uu qoraagu hore uga digay in dhammaadka silsiladdu aysan noqon doonin, ka fog, maadaama Game of Thrones uu waqtigiisii ​​dhammaaday, taasoo laga yaabo inay kordhiso isbeddello badan dhacdooyinkii la soo sheegay ilaa maanta (Waa dhibka ay tixdu gaadhay qoraaga taasina waxay qaadataa wakhti xannibaad).
La xiriira taxanaha Heesta Barafka iyo Dabka waxaa jira sheekooyin gaagaaban oo la xiriira taxanaha, ama xitaa buugaagta wehelka ah. Gaar ah:
Seeftii daacadda ahayd.
Amiiraddii iyo boqoraddii.
Amiirkii dhagarqabaha ahaa
Dunida barafka iyo dabka.
Dab iyo dhiig. Tani waxay noqon doontaa horudhac dhacda 300 sano ka hor Game of Thrones, halkaas oo lagu sheegay taariikhda Guriga Targaryens.
Buuxi liiska buugaagta George RR Martin the anthologies oo uu ka qayb galay (GRRM. A RRetrospective), buugaag sheekooyin gaagaaban ah iyo qaar ka mid ah sheekooyin madaxbannaan, sida A Song for Lya, Fevre's Dream or The Ice Dragon.
Miyaad akhriday buugaagta George RR Martin? Maxay kula tahay? Ma taqaan wax xiiso leh oo ku saabsan taariikh nololeedka qoraaga oo aad noo sheegi karto? Aan ogaano!
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Qorayaasha » George RR Martin
Qaar sheekooyin dhammaystiran ah, oo uu qoray Domingo Villar. Dib u eegid
Federico Moccia: buugaag